Kedu ihe bụ snap oyi? | Network Meteorology
Monica sanchez | | Ebili mmiri oyi
Anyị amata ihe ọnya oyi bụ? Ugbu a, mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Spain niile na-ahụ ọnọdụ ihu igwe nke a na-ahụkarị n'oge oyi, ọ na-atọ ụtọ ịmara ihe ọhụụ a na otu esi amalite.
Ya mere, ka anyị matakwuo gbasara oyi oyi.
1 Kedu ihe ọ bụ?
3 Kedu mgbe a na-atụle oke oyi iji metụta Spain?
4 Usoro nchebe
A oyi snap bụ a onu site na ikuku ikuku na-adasi nke ukwuu n'ihi mwakpo nke ikuku oyi. Ọnọdụ a dịruru ihe karịrị otu ụbọchị ma nwee ike ikpuchi ọtụtụ narị ma ọ bụ puku kilomita.
Ee, e nwere ụdị abụọ:
Oke ikuku nke polar (polar wave, ma ọ bụ polar cold): a na-akpụ ha n'etiti ogo 55 na 70 nke elu. Dabere na ebe ha na-aga, ha ga-ahụ ụfọdụ mgbanwe ma ọ bụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ha agaa ebe nwere okpomoku dị ọkụ karị, ha ga-ekpo ọkụ ma, n'ime nke ahụ, ga-abụ nke anaghị akwụsi ike, si otú a na-akwado nhazi igwe ojii nke ụdị mmiri ozuzo; N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ha agaa na Oké Osimiri Atlantic na Pacific, ikuku ga-ejupụta na iru mmiri ma mgbe ha batara na mmiri ọhụrụ, mmiri nke igwe ojii ma ọ bụ igwe ojii na-ezo ga-etolite.
Igwe ikuku Arctic na Antarctic ma ọ bụ Siberia: ha na-esite na mpaghara ndị dị n’akụkụ okporo ahịhịa ndị ahụ. Ihe eji mara ha bụ okpomoku ha dị elu, nkwụsi ike dị elu, na ọdịnaya dị ala, yabụ igwe ojii dị ụkọ. Ha anaghị emepụta oke snow ọ gwụla ma ha gafere Oké Osimiri Atlantic, ebe ọ bụ na ime nke a, ha anaghị akwụsi ike.
Kedu mgbe a na-atụle oke oyi iji metụta Spain?
Na Spen, e guzobewo ụzọ ndị a:
Ọnọdụ okpomọkụ ga-adaba 6ºC ma ọ dịkarịa ala na 24 awa. Dabere na mpaghara ahụ, opekempe okpomọkụ kwesịrị ịbụ otu ma ọ bụ nke ọzọ:
Na ụsọ oké osimiri nke peninshula, Balearic Islands, Ceuta na Melilla nke kacha nta okpomọkụ ga-eru n'ọnụ ụzọ 0ºC.
N'ebe ndị ịdị elu ya dị n'agbata oke osimiri na mita 200, ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị ala ga-erute ọnụ ụzọ n'etiti 0 na -5ºC.
Na mpaghara ndị ịdị elu ya dị n'etiti 200 na 800 mita, ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị ala ga-erute ọnụ ụzọ n'etiti -5 na -10ºC.
Na mpaghara ndị ịdị elu ya dị n'agbata mita 800 na 1200, ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị ala ga-erute ọnụ ụzọ dị ala karịa -10ºC.
Maka ugwu dị elu karị, emebeghị ọnụ ụzọ ebe ọ bụ na a na-eche na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ ga-eji ya, ma ọ bụ na ọ bụ na mpaghara ndị na-abụghị ndị mmadụ.
Iji zere nsogbu, Ọ dị ezigbo mkpa iji chebe onwe gị pụọ na oyi site na iji akwa akwa, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omumeItinye uwe ogologo ọkpa, sweta na jaket ga-ezu kama itinye ọtụtụ akwa, nke nwere ike iru ala. N'otu aka ahụ, ọ dị mkpa iji chekwaa olu na aka, ebe ọ bụ na ọ bụghị na anyị nwere ike ibute oyi n'oge na-adịghị anya karịa ka anyị chere. Ọ bụrụ na anyị na-arịa ọrịa, anyị ga-agakwuru onye dọkịta ma zere ịpụ n’èzí ruo mgbe ahụ dị anyị mma.
Ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ ala, ị ga-ahụ amụma ihu igwe yana ịchọpụta maka ojiji ị nwere ike iji agbụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị gafere ma ọ bụ gaa ebe snow dara.
Anyị na-atụ anya na isiokwu a bara uru maka gị 🙂.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri oyi » Kedu ihe bụ snap oyi?